Dadka Da'da ah - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Waxaa jira sababo badan oo dadka waaweyni uga qaybqaataan heerarka hoose ee Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP).
Caqabadaha sida in aan la garanayn waxa uu barnaamijku yahay iyo in uu bixiyo gargaar cunto, macluumaad khaldan oo ku saabsan u-qalmitaanka, dhibaatooyinka socodka habka codsiga, ama ceebaynta waxay saamaysaa gelitaanka dadka waaweyn. Si kastaba ha ahaatee Oregon waxa ay samaysay wax badan si loo fududeeyo nidaamka codsiga, ballaadhinta u-qalmitaanka, iyo kordhinta helitaanka dadka waaweyn ee SNAP.
Habka codsiga guud iyo tilmaamaha u-qalmitaanka ee dadka waaweyn waa isku mid sida laga helayo boggayaga Codso SNAP
Dadka waaweyn iyo dadka naafada ah waxay bilaabi karaan nidaamka codsiga iyagoo si fudud u waca deegaankooda Xafiiska Adeegga Sare. Wareysiyada waxaa lagu sameyn karaa taleefanka, xafiis, booqasho guri, ama wakiil la magacaabay.
Faahfaahinta Dadka Waaweyn ee SNAP
Markaad codsanayso SNAP, dadka waaweyni waxay leeyihiin doorashooyin kala duwan oo ay ku tixgeliyaan codsigooda. Qof kasta oo ugu yaraan 60 jir ah ama naafo ah wuxuu dalban karaa kharashyada caafimaadka jeebka ee codsigooda SNAP, taas oo macnaheedu noqon karo inay u qalmi karaan dheefo badan; caddaynta kharashyadan ayaa loo baahan yahay. Wax dheeri ah baro ku saabsan waxa loo arko kharashyada caafimaadka ee jeebka ka baxsan.
Haddii qof weyni uu la nool yahay qoyska waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay iskood u codsadaan SNAP xitaa haddii aysan awoodin inay soo iibsadaan oo ay cunto si gooni ah u diyaariyaan dhibaatada socodka. Kuwa laga yaabo inay dhibaato kala kulmaan gelitaanka dukaanka, qof la aamini karo ayaa loo oggol yahay inuu u isticmaalo dheefaha SNAP iyaga. Si taasi u dhacdo, an foomka lacag-bixinta beddelka ah waa lagu buuxin karaa oo lagu soo celin karaa codsi ama wakhti kasta.
Qaar ka mid ah dadka waaweyn ee waaweyn (65+) ee Oregon, ee ku nool Degmooyinka Clackamas, Columbia, Multnomah iyo Washington waxay ku heli karaan dheefaha SNAP sida dhigaal toos ah, jeeg ama kaarka EBT oo u oggolaanaya fududaynta isticmaalka.
Kaalmo Dheeraad ah oo loo marayo Waaxda Adeegyada Dadweynaha ee Oregon
Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon (ODHS) waa hay'adda ugu muhiimsan ee dawladda ee adeegyada aadanaha ee Oregon. ODHS waxay ka caawisaa dadka reer Oregon inay gaadhaan fayoobi iyo madaxbannaani iyada oo loo marayo fursadaha ilaalinaya, awood siinta, ixtiraamka doorashada iyo ilaalinta sharafta. ODHS waxay ka caawisaa dheefaha cuntada, guriyeynta, daryeelka korinta, naafanimada korriinka, adeegyada waayeelka iyo kuwa kale oo badan.
Wacyigelinta iyo Khayraadka
Farriinta wacyigelinta waxtarka leh ee dadka waaweyn ee waaweyn
sharxayaa barnaamijka oo uu wax ka qabtaa fikradaha khaldan ee caadiga ah:
SNAP waa halkaas marka aad u baahan tahay in lagaa caawiyo gadashada cuntada. Si la mid ah badbaadada bulshada, waxaad horay ugu bixisay barnaamijka lacagta canshuurtaada, sidaas darteed waa kuu diyaar haddii aad la kulanto waqtiyo adag.
Dad badan oo Oregon ah ayaa isticmaala SNAP. Waxaa ku filan dhammaan kuwa xaqa u leh.
SNAP waa fududahay in la isticmaalo.
SNAP waxay caawisaa dhaqaalaha.
Warqadaha Gudbinta SNAP ee Dadka Waaweyn:
Ruush (русский, PDF, 1MB)
Spain (español, PDF, 1MB)
Qoraalka DHS ee dadka waaweyn iyo dadka naafada ah
Ruush (русский, PDF, 3MB)
Spain (Español, PDF, 2MB)
Baro wax badan oo ku saabsan agabka iyo taageerada dadka waaweyn
oo ay ku jiraan ururada bixiya kaalmada codsiga, geynta raashinka ama barnaamijyada kale ee cuntada iyo gargaarka:
Isku xirka Kheyraadka Da'da iyo Naafada ee Oregon (ADRC)
Wac ADRC halkan 1-855-ORE-ADRC (1-855-673-2372)
U dir ADRC an fariin online ah